Caalamka Online » Madaxwaynaha Daalka Maraykanka Donald Trump oo Ra’iisulwasaaraha Uk dhulka La galay
Madaxwaynaha Daalka Maraykanka Donald Trump oo Ra’iisulwasaaraha Uk dhulka La galay
Madaxweynaha Dalka Maraykanka Donald Trump ayaa Ra’iisulwasaaraha Britain Theresa May u sheegay in ay diiradda saarto argagixisada Muslimiinta ah Sida uu hadalka Udhigay ka dib markii ay ku dhaliishay in uu sii faafiyay muuqaalo ay Muslim nacayb ku jiraan oo ay baahiyeen qolyaha garabka Midig.
Afhayeen u hadlan RW UK Theresa May ayaa sheegay in ay khalad ahayd in uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump sidaa yeelo”.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa ku cel celiya Muslim nacaybka tirada badan ee ka muuqda waxa uuna horay dhowr jeer U faafiyay muuqaalo cnsuriyad ka muuqato oo uu ku jiro mi ay soo galiyeen onlineka koox British ah oo cunsuriyad ka muuqato.
Qoraalka Trump uu soo galiyay Rwitter ka.
“Ha igu mashquulin ee diiradda saar kooxaha argagixisada ah ee xagjirka islamka ah ee kharbudaadda ka wada Boqortooyada Ingiriiska,” ayuu Trump ku soo qoray Twitterka.
hadalka Theresa May ayaa yimid ka dib markii uu ku trump Faaafiyay Twitterka Muuqaal uu sameeyay nin lagu maagacaabo Fransen oo lagu sheegay in uu yahay qof Muslim ah oo weeraraya nin kale, waxaana sii raacay labo muuqaal oo kale Fransen uu ku sheegay Muslimiin.
Madaxwaynaha Maarayka ayaa joogto u isticmaaala Twitter ka wuxuuna joogto ugu soo qoraa qoraaalo cunsuriyad ka muuqato, isaga oo maalinkasta dad wax ka sheega, waxaana bartiisa ku xiran 40 milyan oo ruux.